Lenovo Z5 rere na ụbọchị mbụ ya na ire ere na China | Gam akporosis
Eder Ferreño | | China gam akporo, Lenovo, Mobiles
Otu izu gara aga, Lenovo Z5 gosipụtara n’ihu ọha, flagship ọhụrụ nke ndị na-emepụta China. Ekwentị nke kwere nkwa ọtụtụ dabere na eserese ya, mana na mgbe emechara ya, mmetụta zuru oke bụ nke ndakpọ olileanya. Nnwale acid ahụ bụ mmalite ya na ahịa, nke mere na June 12 na China. O yikwara ka ule ahụ ọ agafeela.
Maka na Lenovo Z5 eresị ya ụbọchị mbụ na-ere na China. O mekwara ya n’ime naanị nkeji ole na ole. Yabụ na ọ dị ka ngwaọrụ onye nrụpụta na-ebute mmasị na mba ahụ. Ọnụ ala ya, naanị euro 172 iji gbanwee, na-enyekwara aka.
Emeela ekwentị ahụ na ụlọ ahịa ndị China ama ama JD.com. Na ụbọchị mbu maka ire ere, aghọwo ekwentị kacha mma na ụlọ ahịa. Yabụ ire ahịa nke Lenovo Z5 a dị ezigbo mma. Agbanyeghị, ma ọ dịkarịa ala ruo ugbu a, enwetabeghị ọnụahịa ahịa ọ bụla.
N'ụzọ dị otú a, Ọ karịrị ekwentị ndị ọzọ dịka Xiaomi Mi 12 ma ọ bụ iPhone X na ahịa na Tuesday, June 8. Nsonaazụ dị ezigbo mma maka onye nrụpụta, onye chọrọ ịme ala furu efu n'ahịa ụlọ. Ngwaọrụ a nwere ike inye aka na nke a.
Ọ dị ka ajọ mkpọsa nke ụlọ ọrụ ahụ mere, nke bụkarịrị ihe kpatara nkụda mmụọ nke ọtụtụ ụlọ ahịa gosipụtara, enweghị mmetụta na ahịa ya. Lenovo Z5 na-enye ezigbo ego, nke mere ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka ọtụtụ ịtụle.
N'oge ahụ, a na-ebupụta ekwentị na ahịa na China. Amabeghị mgbe ọ ga-abata na mba ndị ọzọ, ọ bụrụ na ha ga-amalite ya. Ya mere, anyị ga-echere oge. Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ma ọ bụrụ na ọ na-ejisi ike iji soro ezigbo ahịa na ahịa n'izu na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The Lenovo Z5 na-ere na nkeji na ya igba egbe na China
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa na gam akporo yana mmelite na-abịanụ
Samsung Galaxy S7 na S7 Edge melite gam akporo 8.0 Oreo na Spain